Text Muqaal - Sida loo sameeyo Muqaal ah oo la Text
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo qoraalka ah iyo Muqaal
Samee Muqaal ah oo la Qoraaladda iyo Saamaynta Text
Flash Gallery Factory waa fiican fududahay in la isticmaalo. Ka dib markii ay soo degida images barnaamijka, waxaad iyaga ka bedel karo iyada oo qalabka tafatirka dhisay-in, ku dar qoraalka iyo saamaynta qoraalka, ka dibna aad u badbaadin karin slideshow ay u computer, ama si toos ah online wadaagaan. Code ayaa sidoo kale ahbaa aad muddo soo bandhiga. Marka aad rabto in aad u Cudarada bogga internetka ah, kaliya paste code si aad u hesho waxa ay soo bandhigeen ee bogga. Halkan waxaa ku qoran tusaale slideshow sawir aan qoraalka (aad ku dari karaysaa marka aad naftaada iyo Muqaal):
Ku dar sawiro iyo qoraal barnaamijka. Haddii aad u baahan tahay slideshow qoraal ah oo aan sawir kasta, waxaad ku dari kartaa sawir asalka ah oo geli qoraalka ku yaal.
Dooro template slideshow qoraal ah oo ka badan, kuwaas oo soo bandhigi doonaa slideshow hab la dhalaalayay. Rucubood oo arrimo 2D iyo 3D ayaa laga heli karaa.
Save iyo daabacaan slideshow qoraalka.
Baro wax badan oo: User Guide ee Flash Gallery Factory .
Cod iyo Muqaal Tusaale
var sheegyada = new Array ()
sheegyada  = "<a href='http://www.text_slideshow_url.com'> Samee slidewshows la qoraalka ee daqiiqo. </a>"
sheegyada  = "<a href="/span> http://www.text_slideshow_url.com '> dar qoraalka kartoon ah oo HyperLink waa la heli karaa. </a> "
sheegyada  = "<a href="/span> http://www.text_slideshow_url.com '> qoraalka iyo tilmaanta Add to sawiro. </a> "
bandhigay function ()
document.getElementById ('oraah'). innerHTML = sheegyada [a]
setTimeout ("bandhigay ()", 3000 )
Marka labaad , dhigtay div sida hoose halkaas oo aad rabto in aad meel u slideshow qoraalka, laakiin waxay u dhaxeysaa <jirka> iyo </ jirka> tags. In aad badasho qaabka qoraalka iyo midabka asalka, si loo waafajiyo baahidaada.
<Div id = "oraah" style = "background-color: casuur ah, waayo width: 300 px, oo sarajooggiisu: 50 px, kursiga: 15px 0 0 5px; ">
Dhammaan sameeyo. Save isbedelada oo ku eegaan la web browser. Halkan waa tusaale slideshow qoraalka . Fiiri haddii ay tahay waxa aad doonayso.